CLUB BAR(YGN) - Myanmar DJs
All GroupsMy Groups CLUB BAR(YGN)
Created by EZZY
FOR ALL DANCE....
ENTERTAINMENT & FREE DOWNLOAD
HOT SUMMER DANCE & DJ PARTY.
CLUB BARကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ.သူငယ်ချင်းများပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ.ပါစေCLUB BAR GROUP လေးကိုပြုလုပ်ရတဲ.ရည်ရွယ်ချက်ကတော.သူငယ်ချင်းများအားလုံးမြူးကြွတဲ.CLUB MIXလေးတွေအားရပါးရနားထောင်နိုင်ဖို.နဲ.CLUB MIXလေးတွေDOWNLOADလုပ်နိုင်ဖို.ပါ..CLUB MIXတွေကိုCLUB BAR စာမျက်နှာရဲ.ညာဘက်ထောင်.အပေါ်နားမှာPAGEလေးတွေခွဲပြီးDOWNLOAD LINKလေးတွေနဲ.ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်းPAGEတစ်ခုချင်းဆီဝင်ပြီးကြိုက်တဲ.သီချင်းကိုတခါတည်းဒေါင်းနိုင်ပါပြီ..Share Websiteတွေကိုထပ်သွားစရာမလိုပဲဒီမှာတစ်ခါတည်းနဲ.ဒါရိုက်ဒေါင်းလို.ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်..............။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေ..............................................................................။အော်..သူငယ်ချင်းတို.ရဲ.သီချင်းတွေလဲဒီနေရာလေးမှာShareသွားနိုင်တယ်နော်.......... Discussion Forum
Started by EZZY. Last reply by nyi nyi Mar 28.2Replies
CLUB BARကိုဝင်ရောက်လာကြတဲ.သူငယ်ချင်းများပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ.ပါစေCLUB BAR GROUP လေးကိုပြုလုပ်ရတဲ.ရည်ရွယ်ချက်ကတော.သူငယ်ချင်းများအားလုံးမြူးကြွတဲ.CLUB MIXလေးတွေအားရပါးရနားထောင်နိုင်ဖို.နဲ.CLUB…ContinueTags: dance, bar, Club View All
You need to beamember of CLUB BAR(YGN) to add comments!
Comment by Htet Wai Yan on January 15, 2013 at 3:14pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အောင်မြင်ပါစေ !!! Comment by Black Star on November 26, 2012 at 1:29pm hi , haveanice par.....for all of my dear frs. everything is ok kya par zay.....! Comment by DJVoidJoker on November 25, 2012 at 6:26pm ဒီမှာရှိတဲ့DJပညာရှင်အပေါင်းတိုရေ...ကျနော်လိုချင်နေတဲ့remixရှိပါတရ်ဗျာစိုးပိုင်ရဲ့နေရောင်တောင်စွယ်မှာကွယ်ရင်ရယ်..
Comment by A.P.K on October 15, 2012 at 1:44pm .ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်,အောင်မြင်ပါစေ bro!!! Comment by DeeJay Pixic on September 10, 2012 at 3:58pm သီချင်းအသစ်တွေလုပ်ပါအုန်း
Comment by djthatoe on August 19, 2012 at 7:19pm ako .. yay club song ကောင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်ပေးပါအုံးနော် Comment by ★ကြယ်စင်လင်း★ on August 10, 2012 at 6:12pm မင်္ဂလာပါ မန်ဘာအသစ်လေးပါ ကျေးဇူးအမျာကြီးတင်ပါတယ်း) Comment by EZZY on August 4, 2012 at 5:18pm ဟုတ်ကဲ.ပါခင်ဗျာ
ဒီYGN CLUB BAR လေးမှာအဖွဲ.၀င်သူငယ်ချင်းတွေအရေအတွက်များလာတဲ.အခါ
MYANMAR DJS ထဲကဒီYGN CLUB BARလေးကိုအဖွဲ.၀င်သူငယ်ချင်းများများဝင်လာအောင်ကြေညာပေးကြပါအုန်းလို.
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...................................................။ Comment by johnhowert on July 26, 2012 at 5:40am this isagreat club bar community.keep on going to grow up dj community and dance forever.... Comment by arkardj on July 14, 2012 at 9:16pm အသစ်တွေပေးပါဦးဗျာ.............. ‹ Previous
(1) DJ CLUB PARTY- VOL-I
(2) DJ CLUB PARTY- VOL-II
(3) DJ CLUB PARTY-VOL-III